Usiza abangena emshadweni ngohlelo lwakhe
UMCULI, uPuleng March, owethula uhlelo Abasemzini nosekhiphe i-albhamu entsha ethi Heaven’s Scroll Isithombe: INSTAGRAM
Bongiwe Zuma | November 23, 2021
NGESIKHATHI esungula inhlangano esiza abesifazane abangena emendweni, wayengazi ukuthi usezivulela inhlanhla yokungena kwezethelevishini umculi wokholo owaduma kwiJoyous Celebration.
UPuleng March, owaziwa kakhulu ngengoma ethi Ke Laolwa Ke Moya, Ngobekezela nezinye eziningi ayezicula neJoyous Celebration, uthi kufezeke iphupho eshintsha impilo yomakoti nomamezala ngohlelo, Abasemzini, alwethulwa kwi-1 Magic njalo ngo-20:30 ngoLwesihlanu.
Abasemzini wuhlelo olusiza umalokazana nomamezala abebengangenelani bavulelane izifuba bese bethelelana amanzi, nokuhambisana nokwenziwa yinhlangano yakhe, Omakoti Enkosini. Ukuqala kwalolu hlelo uPuleng uthi naye kumkhulisile ngoba ufunde izinto eziningi ngempilo yasemshadweni.
UPuleng, ohlanganisa unyaka ka-15 emshadweni, uveza ukuthi kuningi naye abengakwazi kahle ngomendo nokwamenza wabasukumela abanye besifazane uma bemkhalela ngezinkinga ababhekene nazo emendweni.
"Ngigane ngimncane, okuningi ngakufunda ngendlela, namanje kulolu hlelo ngifunda okuningi njalo uma kushuthwa nalabo mamezala nomakoti. Uma abantu bengayeka ukuhlala bebeka kabi umshado nendlela omakoti nomamezala abaphathana ngayo, kungaba nomehluko. Kunalokho kube nezinhlelo zokulungiselela owesifazane uma ezoshada abe nolwazi ngempilo yasemshadweni. Umshado yinto enhle edinga ukuthi abantu bacathulisane, bafundane, basizane babekezelelane nasemaphutheni," kusho uPuleng.
Wethula lolu hlelo nje, nasemculweni akamile njengoba ekhiphe i-albhamu entsha ethi Heaven's Scroll egabe ngezingoma eziwu-13 nayikhiphe ngaphansi kwenkampani ethi yena, iKemoto Entertainment. Le albhamu uPuleng uyicula ngezilimi zaseNingizimu Afrika ezahlukene okubalwa isiSuthu, isiBhunu, isiZulu, iSetswana, isiNgisi kanjalo nolimi lwaseGhana. Lokhu uveze ukuthi ukwenza nangokwesekwa ngumyeni wakhe, uJoshua, izingane zabo ezimbili, unina nodadewabo ababili.
UPuleng unenqwaba yezindondo aseziwole emculweni okubalwa ezeMetro ezimbili, ezeSABC Crown Gospel Music, ezinhlanu azithola eNorthern Cape, eyodwa yeNgoma neyeHorizon. Lokhu uthe kumenze waliphathisa okwezikhali zamaNtungwa ikhono lakhe ngoba kuyakhombisa ukuthi abantu bayawuthakasela umculo awubhalayo. Ukuvezile nokuthi kuke kwalahleka zonke izingoma abesezibhalile waziqeda, abehlele ukuzifaka kwiHeaven's Scroll, kwadingeka ukuthi aqambe ezintsha.
Abakuleli efilimini yaseHollywood
Wonke umuntu uyazi ukuthi uKelly usebenzisa amakhathakhatha: Jub Jub
URamaphosa akakhulume nezwe uma kubalulekile
Phansi amaphaphu ngegciwane elisha: ongoti
Yehlukene imibono ngesiphakamiso somgomo oyimpoqo
UBroos akayiboni eyokuphindwa koweBafana neGhana